Shiinaha Translucent cad M104 / Caano cad M102 / Caddaan warshad M101 cad iyo soosaarayaasha | Baizan
Caddaan cad M104 / Caano cad M102 / Caddaan cad M101
Filimka Baizan midabka pvb ee loogu talagalay muraayadda naqshadda dhismaha.
Baizan waxay siin kartaa filim midab badan oo macaamiisha ay ku doortaan midab deggan oo saxan.
mugga wax soo saarka> 12000t sanadkii
Wakhtiga la bixinaayo: 5-15days
Waxaan sida caadiga ah siinaa 3 sawir oo xamuulka xamuul ah macaamiisha.
Sawir weel madhan
Marka hore, ka hor rarka, waxaan sawir ka qaadnaa weel madhan
Sawirka weelka oo buuxa
Kadibna, waxaan u isticmaalnaa forklift si aan ugu rarno weelka. Si loo yareeyo kharashka gaadiidka, waxaan u baahanahay inaan alaabooyinka u qaabeyno si macquul ah si booska weelka si buuxda loogu isticmaali karo. Kuwa soosocda waa alaabooyin qeexitaano kaladuwan iyo tirada ugu badan ee weelka 20GP.
Nooca qeexida iyo kartida Weelka
dhumucdiisuna （mm） ballaadhkeed (mm) dherer (m / 卷) 20'container (㎡)
Sawirka albaabka weelka
Ugu dambeyntiina, waxaan bixinnaa sawirka albaabka weelka, waxaa ku jira macluumaad kala duwan sida nambarka weelka iwm.
Badiyaa waxaa jira seddex nooc oo gaadiidka ah oo aad adigu dooran karto
Macaamiisha badankood waxay badanaa doortaan gaadiidka badda. Gaadiidka baddu waxay leeyihiin faa'iidooyinka tiro badan iyo qiimo jaban.
Waxay kuxirantahay masaafada uu leeyahay macaamilka, waqtiga rarku waa min 1 usbuuc ilaa 2 bilood
2. transportaion tareenka
Wadamada deriska ah, waxaan u isticmaali karnaa transportaion tareenka
Marka la barbardhigo gaadiidka badda iyo gaadiidka tareenka, waxay leedahay faa'iidooyinka xawaaraha sare, oo aan ku xirnayn xaddidaadda xaaladaha dhulka. Haddii macaamilku haysto amar degdeg ah, waxaan dooran karnaa gaadiidka hawada.
Hore: cagaar fudud GN101 / Vridis GN108
Xiga: Dhexdhexaad bunni BK104 / Dhexdhexaad bunni BK103
Casaan R101 / Casaan casaan R108